काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेविरुद्ध अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्।
मनाङेले मंगलबार गुरुङलाई झपड हानेका थिए। त्यसपछि माननीय भएको भन्दै गुरुङले आफूले संयमता अपनाएको र त्यसविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिने बताएका थिए। गुरुङले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मनाङेविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएको जानकारी दिए।
मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको मुख्यमन्त्री कप उद्घाटन कार्यक्रममा सांसद मनाङेले एन्फा अध्यक्षलाई झापड हानेपछि विवाद चुलिएको थियो।
यसैबीच मनाङेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले गुरुङलाई झापड हानेर सही काम गरेको दाबी गरेका छन्। गुरुङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मनाङेले भने, 'ठगलाई मैले झापड नहानेर माला लगाइदिऊँ त ? यस्तो मान्छेलाई सबैले झापड हान्ने हो, मैले पनि हानें।'
'झापड किन हान्नुभएको नि ? अरु पनि त कानुनी बाटो छन्,' भन्ने सञ्चारकर्मीकाे जिज्ञासामा उनले आफूले दिएको झापड नै कानुन भएको बताए। उनले यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नभएको तर्क गरे। झापड हानेर सही गर्नुभएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई राम्रो लागेको छ। तपाईंलाई नराम्रो लागेको छ भने लेख्नुस् न यार !’
उनले आफू रावणतिरको परेकाले झापड हान्दा मज्जा आउने बताए। उनले पत्रकारलाई भने, ‘तपाईंहरु गान्धीतिरको हुनुहुँदो रहेछ, मचाहिँ रावणतिर परेँ, झापड हान्दा मज्जा आउँछ।'